people Nepal » यी हुनेछन् नयाँ आइफोनका खास फिचर ! यी हुनेछन् नयाँ आइफोनका खास फिचर ! – people Nepal
यी हुनेछन् नयाँ आइफोनका खास फिचर !
प्रविधि सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्ने म्याकवल्र्डका अनुसार कम्पनीले हालसम्म १५ वटा आइफोन ल्याइसकेको छ। सुरुआतको आइफोनदेखि ७ प्लससम्म आइपुग्दा यसका स्वरुप, फिचर र प्रविधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन्।
-कर्भ्ड एमोलेड डिस्प्लेः हामीले देख्दै आएको सामसुङ सेभेन एस एजको झैं यसको स्क्रिनको छेउ मोडिएको हुनेछ। यसमा ५.८ इन्चको स्क्रिन हुनेछ।